Zvakazarurwa 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
8 Zvino Gwayana parakavhura+ chisimbiso chechinomwe,+ runyararo rwakavapo kudenga kweinenge hafu yeawa. 2 Ndakaona ngirozi nomwe+ dzinomira pamberi paMwari, uye dzakapiwa mabhosvo manomwe. 3 Imwe ngirozi yakasvika, ikamira paatari,+ iine mudziyo wendarama wokupisira rusenzi; uye yakapiwa rusenzi+ zhinji kwazvo kuti iipisire paatari yendarama yakanga iri pamberi pechigaro choumambo, minyengetero yevatsvene vose payainzwiwa. 4 Utsi hwerusenzi hwakakwira pamberi paMwari huchibva muruoko rwengirozi pamwe chete neminyengetero+ yevatsvene. 5 Asi ngirozi yacho yakabva yatora mudziyo wokupisira rusenzi, ikauzadza nomumwe moto+ wepaatari, ikakanda moto wacho panyika.+ Naizvozvo kutinhira+ nemanzwi nemheni+ nokudengenyeka kwenyika+ zvakavapo. 6 Ngirozi nomwe dzaiva nemabhosvo+ manomwe+ dzakagadzirira kuaridza. 7 Yokutanga yakaridza bhosvo rayo. Naizvozvo kwakava nechimvuramabwe nomoto+ zvakasangana neropa, uye zvakakandwa panyika; chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvenyika chakatsva,+ chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvemiti chakatsva, uye zvinomera zvose zvakasvibirira+ zvakatsva. 8 Ngirozi yechipiri yakaridza bhosvo rayo. Naizvozvo chimwe chinhu chakafanana negomo guru+ raibvira moto chakakandwa mugungwa.+ Chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvegungwa chakava ropa;+ 9 uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezvisikwa zviri mugungwa zvine mweya chakafa,+ uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezvikepe chakaparadzwa. 10 Ngirozi yechitatu yakaridza bhosvo rayo. Naizvozvo nyeredzi huru yaibvira serambi yakawa kubva kudenga,+ ikawira pachikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvenzizi nepamusoro pezvitubu zvemvura.+ 11 Nyeredzi yacho inonzi Chinovava. Chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvemvura chakaitwa kuti chivave, uye vanhu vazhinji vakafa nemvura yacho, nokuti yakanga yaitwa kuti ivave.+ 12 Ngirozi yechina yakaridza bhosvo rayo. Naizvozvo chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvezuva chakarohwa pamwe chete nechikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvomwedzi nechikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvenyeredzi, kuti chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvazvo chisvibiswe+ uye kuti masikati arege kuva nechiedza kwechikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvawo,+ uye usiku huitewo saizvozvo. 13 Zvino ndakaona, uye ndakanzwa gondo+ richibhururuka pakati pedenga,+ richiti nenzwi guru: “Vane nhamo, vane nhamo, vane nhamo+ vaya vanogara panyika nokuda kwokurira kwose kwemabhosvo engirozi nhatu dzava kuda kuridza mabhosvo adzo!”+